Kedu usoro, usoro, na ọwa kwesịrị ndị na-ere ahịa lekwasịrị anya na 2017 | Martech Zone
M na-atụ anya na-agụ na ihe ma ọ bụ na anyị obodo ihe ị na-elekwasị anya na 2017. Dị ka ihe gị n'ụlọnga, anyị na-na-wetara na otutu ntụziaka ma anyị na-elekwasị anya na ndị ahịa na-aga na-ebuli ha ahịa na-emefu na-enye uru na Ngwaahịa na ọrụ anyị nke ha tinyeworo. Otu uru anyị nwere dịka onye mbipụta akwụkwọ na ụlọ ọrụ bụ na anyị nwere ike ịnwale ihe na-egbu maramara iji belata ihe ize ndụ ọ bụla. Nkuchi ngwa ngwa nke teknụzụ ahịa bara uru… kama ọ bụ naanị mgbe ọ nwere ezi uche.
Iji nyere gị aka belata mgbado anya gị, lelee ozi ọhụụ ọhụụ nke MDG, Mkpebi 7 Onye Ahịa Ga-eme Maka 2017. Ọ na-egosipụta echiche na ụzọ dị mkpa nke kwesịrị ịkwado gị nke ọma maka afọ na-abịa.
Anyị lere anya otu afọ ọzọ nke atụmanya anyị. Ha enweghi mmefu ego ma obu ndi otu ighota ahia ha. N'ihi nke a, etinyere ọtụtụ n'ime ọrụ ha toro eto na ma ọ bụ ihe ha nwere ike ego idebe isi ha n’elu mmiri. Otu ụzọ metrik anyị hụrụ furu efu na atụmanya ọ bụla bụ atụmanya nke ihe ha ntinye ego nke ahia ahia kwesiri ibu pasent nke ego ha nwetara. Nke ahụ bụ nnukwu ịdọ aka ná ntị itinye ego na azụmaahịa gị ugbu a, karịa ka emechara, ka ị nwee ike ịga n'ihu mee ka uto gị dị ngwa.
Atụmatụ ahia, usoro, ma ọ bụ ọwa iji lekwasị anya na 2017
Ndị mmadụ n'otu n'otu, ọ bụghị ọwa: naanị 25% nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ nwere atụmatụ zuru oke na-elekwasị anya na atụmatụ gị na njem nke ndị na-eri ihe na akaụntụ ga-enyere gị aka ịkwalite na ijikọta usoro gị niile. Azụ ahịa dabere na akaụntụ (ABM) na-aga n'ihu ịchụ ọtụtụ n'ime atụmatụ ndị a.
Automation: 94% nke ndị na-ere ahịa na-akpaghị aka ụfọdụ mmemme ha na-ekwu na ọ ka mma ụlọ ọrụ ha Ọ bụ ezie na ọwa na usoro dịwanye mgbagwoju anya, ngwa ahịa na ụlọ ọrụ na-adịkarị ụkọ. Nanị nhọrọ maka ndị na-ere ahịa bụ ile anya na teknụzụ azụmaahịa iji jikwaa ma bulie usoro azụmaahịa ha.
content: 58% nke ndị ahịa # B2B kachasị dị irè nwere usoro ederede ọdịnaya azụmaahịa Azụmaahịa na-ewepụta ọtụtụ ihe eji eme ihe, ndị a na-ahụghị, na obere arụmọrụ kwa ụbọchị. Anyị ga-akwadoro ịkwalite Ọbá akwụkwọ ọdịnaya uzo nke imeputa ọdịnaya.
Hydị ọcha data: 24% nke ahịa ndị ahịa na-ere ahịa na-ezighi ezi, na nkezi Dịka nhazigharị na ahụmịhe ịntanetị na nke ndị ahịa na-atụghị anya ka ndị ahịa na azụmaahịa na-atụ anya ha, data ọjọọ ga-aghọ ogwu n'akụkụ ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nke a bụ ihe kpatara ya ahịa data nyiwe na-eto eto na nkuchi.
Video: Enwere mmụba 20% na ọnụ ọgụgụ vidio ịntanetị lere na 2016 Video na-aghọ ngwa ngwa ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa. Learningmụta ụdọ nke vidiyo - dịka otu ọnụ ala ọdịyo na-afụ ụfụ karia vidiyo ojoo - di nkpa dika oku, edemede, na ogologo vidiyo.
Security: 29% nke ndị ahịa niile na-ezere omume ịntanetị n'ihi nchedo ntụkwasị obi ntụkwasị obi bụ otu n'ime nsogbu kachasị nye onye na-azụ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-achọta gị n'ịntanetị ma na-atụgharị site na atụmanya ịbụ onye ahịa. Gbaa mbọ hụ ha data nwere nchekwa ma na-ekwupụta usoro ị ga - eme iji chekwaa ọdịnaya ha dị mkpa.
Teknụzụ Na-apụta: A na-atụle Amamịghe Amụma ka ọ gbasaa okpukpu abụọ nke mmụba nke akụ na ụba site na 2035 na Virtual eziokwu trafficntanetị okporo ụzọ na-eme atụmatụ ịbawanye 61 ugboro site na 2020. Teknụzụ ndị a nwere ikike dị ịtụnanya na ịkwalite njem ndị ahịa na ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa.
Tags: abmahia dabere na ahịaakpaakaahia ọwaỌbá akwụkwọ ọdịnayacontent Marketingahịa datanhicha dataabụrụ teknụzụakụrụngwa ahịasecurityọdịnaya vidiyoahịa vidiyo
Atụmatụ 10 dị mkpa maka ndị na-ere ahịa Novice